Iinkqubo zokwenza i-infographics: Iinkqubo ezingcono kakhulu ze-infographics | Creatives Online
Xa siyila iprojekthi, inokuba nolwazi. Olu lwazi lunokuhanjiswa ngeendlela ezininzi. Kwelinye icala, xa sifumana iprojekthi eshwankathela yonke into efuna ukuyithetha, kuhlobo lwepowusta yolwazi, siyibiza loo nto. ngezantsi.
Kule posi asiyi kukubonisa kuphela ihlabathi le-infographics, kodwa kwakhona, ukuze itsalele ingqalelo yakho ngakumbi kwaye uyazi ngakumbi ngayo, siza kukubonisa ezona zicelo / amaphepha ewebhu apho unokuyila kwaye banike, ngale ndlela, ukuchukumisa abantu abaninzi emsebenzini wakho.
Siza kukucacisela ngezantsi.
1.1 Iingcebiso zokwenza i-infographic elungileyo
1.2 U mzekelo
1.2.2 I-hieroglyphs yaseYiputa
1.2.3 UWilliam Playfair
1.3 Iindidi ze-infographics
1.3.5 Ingxelo ngobomi
2 Izixhobo ezingcono kakhulu
Ukuba bekufuneka sichaze ukuba yintoni i-infographic, kuya kuba kuhle ukuqala ngokubonakaliswa okubonakalayo kolwazi kunye nedatha. Ngokudibanisa isicatshulwa, iigrafu, imizobo, kunye nezinto zomfanekiso wevidiyo, i-infographic iba sisixhobo esisebenzayo sokubonisa idatha kunye nokuchaza iingxaki ezinzima ngendlela enokukhawuleza ukukhokelela ekuqondeni okungcono.
Kule nto, i-infographic elungileyo kufuneka ibe umaleko:
Yazisa kwaye ufundise kubasebenzisi ekujoliswe kubo ulwazi olunjalo.
Akufunekanga iqulathe nje inkalo enye nomtsalane, ngaphandle kwakhona iyasebenza.
Kufuneka kwakhona ifikelele iingqondo zabasebenzisi kunye nezabo ukuqonda.
Ngenxa yesi sizathu, ingcamango ye-infographics iye yanda kumashishini amaninzi kule minyaka ilishumi idlulileyo, ibe sisixhobo esinamandla sonxibelelwano kwiinkampani, oorhulumente kunye namaziko emfundo. Kukho abaphulaphuli abatsha ngokupheleleyo beengcali ezinomdla ekuboniseni idatha ngendlela enyanzelisayo, enokuqonda kunye nenomdla.
Iingcebiso zokwenza i-infographic elungileyo
Njengoko songeze ngaphambili, i-infographics inamandla okubonisa idatha entsonkothileyo ngendlela emfutshane kwaye ibonwa kakhulu. Xa yenziwe ngokufanelekileyo, i-infographics ixelela amabali ukuba idatha iqulethe ngokufanelekileyo, okwenza ulwazi lube lula ukwetyisa, ukufundisa, kunye nokuzibandakanya.
Ukushwankathela le ngongoma ngendlela enomtsalane ngakumbi, I-infographic elungileyo kufuneka ihambelane nalo lonke ulwazi lwayo kuluntu oluya kubhekiswa kulo kunye neyona miba yemizobo., oko kukuthi, imifanekiso elula kunye neempawu, i-hierarchy efanelekileyo yeetekisi kunye ne-typography ecacileyo kunye necacileyo.
Ulwazi olulungileyo: Umsebenzi ophambili kukuba nohlobo oluthile lwebali ukuxelela abanye, kuba alikwazi ukuhamba lilambatha, ngakumbi ungafuni ukunika ingxelo ngesihloko esithile. Nje ukuba ufumene olu lwazi, inqaku ngalinye eliphambili eliye lashwankathelwa kwaye laqokelelwa lilungelelanisiwe.
Ukulula: Asifuni ukuba umfundi asebenze nzima kunokuba kufuneka enze ukuba baqonde umsebenzi wakho. Iseti ebonakalayo egcwele kakhulu ayimnandi ukuyijonga kwaye ihlala iphazamisa umyalezo. Ke ngoko, kuyakhethwa ukuba kube lula ukusetyenziswa njengowona mthombo uphambili wokuqonda kunye nempumelelo yomsebenzi wakho.
Akuyimfuneko ukuba sicinge ngomfanekiso onombhalo omningi osasazwayo kunye nemifanekiso ehamba nayo. Enyanisweni, kungcono ukuba sibuyele kwiminyaka edlulileyo kwimbali kwaye siqonde ukuba siphila kunye namawaka kunye namawaka e-infographics.
Akukho kuphikisana malunga nokuba amadoda angaphambili ayengabayili bokuqala be-infographic. Baguqula ubomi bemihla ngemihla baba yimifanekiso yokuzalwa, amadabi, izilwanyana zasendle, ukufa nemibhiyozo.
I-hieroglyphs yaseYiputa yayiyinkqubo yokubhala esesikweni eyayisetyenziswa ngamaJiphutha amandulo awayesebenzisa imiqondiso ukubonisa amagama, oonobumba kunye neengqiqo. Yayiyindlela ekhethekileyo kodwa esetyenziswa ngokubanzi kwaye yamkelwe yonxibelelwano, eqala ngo-3000 BC Le hieroglyphs ngokuyinhloko imele ubomi, umsebenzi kunye nenkolo.
UWilliam Playfair uthathwa njengoyise weetshathi zamanani, emva kokuqulunqa umgca kunye neetshathi zebar esihlala sizisebenzisa namhlanje. Ukwanikwa imbeko ngokwenza iitshathi zendawo kunye neetshathi zepayi. UPlayfair wayeyinjineli yaseSkotlani kunye noqoqosho lwezopolitiko owapapasha iAtlas yezoRhwebo kunye nePolitiki ngo-1786.
WayesisiNgesi ngeenkwenkwezi, i-geophysicist, imathematician, meteorologist, kunye nefiziksi eyaziwa kakhulu ngokubala i-orbit ye-Halley's Comet. UHalley uphuhlise ukusetyenziswa kwemigca yecontour kwiimephu ukudibanisa nokuchaza iindawo ezibonisa umahluko phakathi kweemeko zomoya ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Udume ngomsebenzi wakhe njengomongikazi ngexesha leMfazwe yaseCrimea, kodwa wayekwangumbhali wedatha. Wayeqonda ukuba amajoni ayefa ngenxa yokungacoceki nokungondleki, ngoko wagcina iirekhodi ezicokisekileyo zamazinga okufa kwizibhedlele kwaye wabonisa idatha. Imizobo yakhe ethi "coxcomb" okanye "rose" yamnceda ukuba alwele iimeko ezingcono zasesibhedlele ukuze asindise ubomi.
Wayengumzobi waseBritani omsebenzi wakhe ubandakanya uninzi lwezinto ezibonakalayo kunye nedatha esiyibonayo kwi-infographics yanamhlanje. Njengegcisa lokurhweba, wayila iipowusta ezininzi kunye nezibhengezo, ngakumbi ipropaganda yakhe edumileyo yexesha lemfazwe yeOpinion yaseLondon.
Wayengumyili wemizobo waseJamani kunye nomhloli owaziwa kakhulu ngokuyila ii-pictograms zeeOlimpiki zasehlotyeni zika-1972 eMunich. Iipictograms zakhe ezenziwe lula zaba yindlela yonxibelelwano lwendalo yonke, ebonakala kwiimpawu ezininzi zesitrato esizibonayo namhlanje.
UPeter Sullivan wayengumzobi waseBritani owaziwayo nge-infographics awayidalayo kwiThe Sunday Times ngeminyaka yoo-70, 80 kunye noo-90. Incwadi yakhe ethi Newspaper Graphics iseyenye yeencwadi ezimbalwa ezigxile kwiigraphics zolwazi kumaphephandaba.
Ngokuxhomekeke kuhlobo lolwazi esilunikezela kuluntu lwethu, i-infographic ingaba:
Yayiyenye yeendlela eziphambili ezathi zavela kubuntatheli. Injongo yayo kukunika ulwazi olusexesheni okanye ingcamango equka ulwazi olunjalo.
Kuyanceda ukuchaza imiba esisiseko yemveliso. Injongo kukupapasha imveliso okanye inkonzo, kwaye luncedo kakhulu ukubonisa iimpawu zemveliso, kuba inceda ukugxininisa oko kubaluleke kakhulu. Ngokuqaqambisa iimpawu okanye iimpawu ezinamagama amafutshane kunye nemifanekiso ekumgangatho ophezulu, uya kuba nakho ukunika umbono wokuba injani na loo mveliso okanye inkonzo kunye nendlela esebenza ngayo.
Kolu hlobo lwetshathi, ulandelelwano ludla ngokuboniswa ngendlela elungelelanisiweyo. Ngamanye amazwi, isakhiwo sisetyenziswa ngendlela yoluhlu, exhaswa yimifanekiso elandelelanayo okanye imifanekiso. Oku kuluncedo kakhulu ukuba ufuna ukuphuhlisa izikhokelo okanye izifundo ezikhawulezayo kwaye injongo kukushwankathela olo lwazi ngamanyathelo. Kuya kulunga xa ufuna ukuveza ukusebenza kweemveliso zakho okanye indlela yokuthenga.
Luhlobo lwe-infographic ye-didactic ukuququzelela ukufundiswa kwezihloko zesayensi, kodwa ayipheleli ekusetyenzisweni kwayo kwiinjongo zemfundo kuphela. Yisebenzise ukucacisa izihloko ezinzima eziqulathe iikhonsepthi, imigaqo okanye ubuchwephesha kubathengi bakho, ukuba inkampani yakho yeyeshishini elikhethekileyo.
Olu hlobo lwe-infographic luchaza ubomi kunye nomsebenzi womlingiswa, kwezinye iimeko, isebenzisa ii-icon ezinceda ukumela iinkalo ezithile, ezifana nezifundo zabo, ubuzwe babo kunye nemisebenzi ethile, phakathi kwabanye. Xa kuyimfuneko ukuthetha ngomlinganiswa ngokufutshane kwaye ugxininise ezona zinto zibalulekileyo ebomini bakhe, lo mthombo uluncedo kakhulu ekuchazeni ukuba ngubani okanye wayengubani loo mntu. Yisebenzise ukuthetha malunga nomseki wenkampani yakho okanye abaphandi abakhokelayo kwishishini lakho.
Basebenza ngokujonga indawo yesiganeko ngeemaphu. Zingasetyenziselwa ukubonisa indawo okanye inethiwekhi yokwandisa. Ukuba injongo yakho kukubonisa indawo apho isiganeko okanye uthotho lweziganeko zenzekile okanye ziya kwenzeka, okanye ukulandelela indlela yejografi okanye ukuhlala komntu okanye into, unokudala ulwazi lwejografi.
Izixhobo ezingcono kakhulu
Emva kokwenza isishwankathelo esifutshane sento esicinga ukuba yi-infographics, ngezantsi, siza kukubonisa amaphepha ewebhu angcono kakhulu okanye izicelo apho unokwenza khona eyakho kunye neyakho.
I-Canva ithathwa njengenye yezixhobo zokufikelela simahla apho sinokufumana khona iitemplates ukwenza iiprojekthi zethu. Yikhethe nje kwaye uyikhuphele.
Xa singena kwiCanva, sifumana iqhosha lokubhalisa nge-Facebook okanye nge-imeyile yakho. Iwebhusayithi ikunikeza ukhenketho lwenyani ukubona okunokwenzeka kwesixhobo, esinomtsalane kakhulu.
Ubume be-intanethi ikunika iitemplates ezininzi, imifanekiso kunye nezinto, apho abaninzi bakhululekile yaye abanye bahlawulwa. Unako kwakhona ukulayisha eyakho imifanekiso kwaye wabelane ngeziphumo zakho ngokuthe ngqo kwisikhangeli.
Infogram inikezelwe ekudalweni kweziqalo zegraphic. Iwebhusayithi yakhe iyavuyiswa kukuba iinkampani ezingaphezu kwe-30.000 ziyasithemba isixhobo sakhe.
Inguqulelo yayo yasimahla ayinamda wexesha, ineentlobo ezingaphezu kwama-30 zemizobo, ithuba lokungenisa iifayile ze-Excel kunye nokukhetha ukupapasha kwi-Infogram ngokuthe ngqo.
Ngumhleli weefoto oqulethe i-slogan eshiya ngaphandle kwamathandabuzo malunga nendlela yayo: "Jika iifoto zakho zemihla ngemihla zibe zobugcisa". Iziqinisekiso zabo ziqala ngephalethi yokucoca kwiifoto zakho ezingenalo umona kwiimbekiselo ezifana ne-Instagram.
Ngokwezibalo zabo, umanyano lwazo zonke izinto lukhokelela kwimidibaniso enokwenzeka yezigidi ezi-2, ngoko unokuqiniseka ukuba awuyi kubona uyilo lwakho lulandelwa kwenye indawo.
I-Visme sisixhobo sokwenza i-infographics ngemifanekiso ekhangayo. Iza nemisebenzi emininzi yokuzenzekela yokupapasha nokujongwa; Oku kuvumela abapapashi ukuba babeke amaxesha okuzenzekelayo ukungeniswa kunye nohlalutyo lwe-intanethi ukulandelela ukusebenza komxholo opapashiweyo.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye pUnokukhetha kumakhulu eetemplate ze-infographic eziyilwe ngobuchwephesha, iitshathi ezingama-50+ kunye neegrafu, iimephu ezisebenzisanayo, ubumfihlo obugcweleyo bemithombo yeendaba zentlalo, kunye nezixhobo zentsebenziswano.. Unokudibanisa kwaye utshatise iibhloko zomxholo oyilwe kwangaphambili kwithala leencwadi lemultimedia.
I-Snappa inenguqulo yasimahla engenamda wexesha, nangona inakho ukukhuphela, kuba unobuninzi be-3 ngenyanga.. Yisoftware efanelekileyo ukuqalisa ekudalweni kwe-infographics, kuba ikunika ngaphezulu kwe-5.000 yeetemplates kunye ne-1 yezigidi zeegraphics kwinkcazo ephezulu.
Ungafudukela kwizicwangciso zabo ezihlawulelwayo apho uya kuba neempawu eziphambili ezifana nentsebenziswano ye-intanethi kunye nokufakwa kweefonti zakho zesiko.
Esi sixhobo se-intanethi ikunceda wenze i-infographics kunye nomxholo osebenzisanayo, uqulathe amawaka eetemplate ezinonxibelelwano kunye noopopayi abayilwe kwangaphambili ziingcali., onokuthi uyiguqule ngokulula ngokweemfuno zakho.
Ngayo, unokulayisha ezakho izixhobo okanye usebenzise ezo zinikezelwa sisixhobo ukwenza uyilo lwakho. Unokwabelana nge-infographic yakho ngekhonkco, nge-imeyile okanye kwiinethiwekhi zentlalo, nokuba uyifake kwiwebhusayithi yakho kwaye uyikhuphele njengePDF okanye iHTML.
Liqonga lasimahla kwaye unokwenza indalo engenamkhawulo kwaye ufikelele kwiitemplates zasimahla kunye nezixhobo ngonaphakade.
I-Crello sisixhobo soyilo lwegraphic kwi-intanethi sokwenza i-infographics ukusuka kwi-50.000 yeetemplate eziyilwe ngobuchwephesha kunye nethala leencwadi elingenamda elingaphezu kwesigidi esi-1 sempahla yokuyila yasimahla. Ibandakanya imifanekiso yeprimiyamu, iividiyo, ii-vectors, kunye ne-200 yezigidi zeefayile ze-Depositphotos multimedia.
I-interface yayo ilula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye akuyomfuneko ukuba ube namava angaphambili kuyilo; Unokwenza i-infographics enomdla malunga nezibalo, idatha kunye nemihla ngendlela ebukekayo nenomtsalane. Ukongeza kwiitemplates, ngeCrello unokwenza oopopayi bemizobo, wenze ezona tekisi zigqwesileyo ngeefonti ezingaphezu kwama-300 kwaye wongeze izinto ezisuka kwithala leencwadi elidibeneyo. ukwenza inkqubo yakho yokuyila ikhawuleze kwaye ilula ngokusemandleni okanye, ukuba uyathanda, unokulayisha owakho umxholo.
Ixabiso layo lokuqala lisimahla kwaye unokwenza ukuya kuthi ga kwi-5 yokukhuphela ngenyanga, kodwa ukuba ufuna ukwandisa eli nani ngokukhuphela okungenamkhawulo, isicwangciso sepremiyamu yeCrello yi-7,99 yeedola ngenyanga.
UMiro unesixhobo sebhodi emhlophe ukuba ikunceda wenze i-infographics ngentsebenziswano kwaye wabelane ngayo. Inamawaka eetemplates onokuthi uzihlele ngokweemfuno zakho. Esi sixhobo sifanelekile kumaqela oyilo asebenza kude.
Yongeza inkqubo yakho ye-agile ngentsebenziswano yokubuyela umva, yenza kwaye uphuhlise imibono ngamaqela asasazwe ngokungathi akwigumbi elinye, naphi na nangaliphi na ixesha. Ibhodi yayo emhlophe ikuvumela ukuba usebenze ngendlela oyifunayo kwaye unokudibanisa nezinye izicelo ezifana neDropbox, i-Google Suite, i-JIRA, i-Slack kunye ne-Sketch.
Ungamema naliphi na ilungu leqela lakho ukuba lijonge, lihlele okanye linike izimvo kuyilo lwakho simahla; Nangona kunjalo, ukwenza uyilo lwakho lwabucala kufuneka uthenge isicwangciso seprimiyamu ukusuka kwi-16 USD ngenyanga kumaqela ama-2 ukuya kwamalungu esi-7.
Kwi-Piktochart ungasebenzisa ii-icon ezithile kunye nemizobo ukwenza i-infographics yazo zonke iintlobo. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha ithemplate, uhlele umxholo kwaye wabelane ngawo kwiinethiwekhi zakho zentlalo okanye kwiwebhusayithi yakho, ngokukhawuleza kwaye kulula.
Unoyilo oluninzi olucwangcisiweyo njengoko ufuna ukulungisa, uhlala unoyilo olonwabisayo nolonwabisayo oluya kutsala umdla wabaphulaphuli bakho.
I-PicMonkey rhoqo ukubheja ngokulula ngokulula kumhleli wakho we-intanethi: nciphisa inani leentshukumo ukuya kwezona zisisiseko, kodwa nezona zisetyenziswa kakhulu.
Sebenzisa iigraphics zayo ukunika ubomi obuninzi kwi-infographics yakho, kunye nezitayile ezahlukeneyo onokuthi ngazo wenze uluhlu lwamanyathelo omele uwalandele, ubonise izibalo okanye ubonise umda wexesha.
Ukuba ujonge ukubalisa amabali nge-infographic, I-Adobe Spark ineetemplates ze-infographic ezifumanekayo ukuyila ezona zibalaseleyo. Itemplate nganye igcwele imifanekiso, imifanekiso, imvelaphi, isicatshulwa kunye nezinye izinto ezininzi ezibalulekileyo. Kuya kufuneka wenze ngokwezifiso ithemplate nganye ngokweemfuno zakho kunye ne-voila: unokuprinta okanye ukhuphele i-infographic yakho kumcimbi wemizuzwana.
I-interface yayo ilula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye unokuzama isicwangciso sayo seprimiyamu mahala kwiintsuku ezingama-30 kwaye ke ixabiso liqala kwi-14 USD ngenyanga.
Dot.vu liqonga ukuba ikunceda wenze i-infographics esebenzayo ukubamba ingqalelo yabaphulaphuli bakho kwaye uhlangabezane neenjongo zesicwangciso sakho somxholo. Khetha itemplate kuluhlu olubanzi olunikezelwayo kwiMarketPlace kwaye wenze uyilo ngokweemfuno zakho kunye nezikhokelo zophawu lwakho. Unokusebenzisa i-infographic yakho esebenzayo naphi na apho ufuna khona, kufuneka ukope ikhowudi kwaye uyincamathisele kwindawo oyifunayo.
ichaphaza.vu idibanisa nezixhobo zokuhlalutya zangaphandle ukuhlanganisa imizamo yakho kwaye uqinisekise inkcazo epheleleyo echaza kwaye ilinganise impumelelo yazo zonke iiprojekthi zomxholo wonxibelelwano ozenzayo.
Ungasebenzisa naliphi na inqaku le-Dot.vu kwi-infographic yakho ukwenza amava okunxibelelana akhethekileyo. Ixabiso layo yi-USD 453 ngenyanga kwaye ibandakanya iinkonzo zangaphakathi, apho ii-ninjas ezisebenzisanayo zinokuyila nawaphi na amava okunxibelelana nawe.
Ukuba asikasombululi imfihlelo yendlela yokwenza i-infographic enhle, siyakumema ukuba uqhubeke nokuphanda kunye nokukhangela ulwazi malunga nolu hlobo lweprojekthi.
Kulula kakhulu, kwanele ukuba ucace kakhulu malunga nento ofuna ukunxibelelana nayo kwaye zeziphi izinto ezinokuhambelana noko siza kuthetha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iinkqubo zokwenza i-infographics